इन्डोनेसियामा फेरि गए दुई ठूला भूकम्प - Internet Khabar
इन्डोनेसिया, ४ भदौ । इन्डोनेसियाको पर्यटकीय द्वीप लोम्बोकमा आइतबार साँझ दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गएका छन् । भूकम्पका कारण लोम्बोकमा विद्युत सेवा अबरुद्ध भएको छ, ठाउँठाउँमा पहिरो गएको छ र भवनहरुमा ठूलो क्षति भएको छ ।
दुई साताको बीचमा लोम्बोकमा गएका दुईवटा यस्तै ठूला भूकम्पले चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार आइतबार साँझको पहिलो भूकम्प ६.९ म्याग्नीच्यूडको छ भने आजै साँझको अर्को परकम्प ६.३ र ५.४ म्याग्नीच्यूडका छन् ।
यी सबै भूकम्पहरु लोम्बोक द्वीपको उत्तरपूर्वमा केन्द्रित भएका छन् । एपीका एकजना स्थानीय संवाददाताका अनुसार लगातारका भूकम्प र परकम्पका कारण मानिसमा भागदौड मच्चिएको र विद्युत सेवा कटौती भएको छ । तथापि धनजनको क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन ।
पढेको कुरा सम्झनुहुन्न, त्यसो भए यसो गर्नुस् !
इण्डोनेसियाको सुनखानीमा पानी र हिलोले थुनिएर एघारको मृत्यु
‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा गन्धर्वको प्रस्तुतीले सबै चकित, कुबँरले दिईन फाडी ! (भिडियो)